कसरी Harbortouch देखि एक नि: शुल्क POS सिस्टम प्राप्त गर्न | सुनको वेब पुरस्कार
कसरी Harbortouch देखि एक नि: शुल्क POS सिस्टम प्राप्त गर्न
द्वारा Darin कार्टर | जुन 13, 2018 | ब्लग |0टिप्पणीहरू
को POS (बिक्री को बिन्दु) प्रणाली खुद्रा र रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सबैभन्दा महत्वपूर्ण भाग मध्ये एक छ, आजभोलि. तपाईंको आफ्नै अनुकूलित POS सिस्टम भइरहेको भन्दा नगद रजिस्टर तपाईं सबै विस्तृत बिक्री रिपोर्ट प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ. यसरी, यो Accountants लागि रूपमा साथै कोषाध्यक्ष लागि ठूलो छ. यो POS सफ्टवेयर तपाईं सबै यस्ता वस्तु रूपमा बेचिएको विवरण विश्लेषण गर्न मद्दत गर्छ, कुनै पनि आइटम मा प्रस्ताव र प्रचारहरू, यसको बिक्री को समय र पनि कोषाध्यक्ष को नाम. यो शुद्धता प्रदान गर्दछ र यसैले गल्ती कुनै संभावना छन्. तपाईं फुटकर लागि Harbortouch मुक्त POS सिस्टम प्राप्त गर्न सक्छन्, सैलून, रेस्टुरेन्ट र बारहरू साथै वा साना व्यवसायहरू.
Harbortouch के प्रदान गर्छ?
Harbortouch पूर्ण POS सिस्टम समाधान प्रदान. यो POS हार्डवेयर समावेश, POS सफ्टवेयर साथै एकीकृत व्यापारी सेवाहरू कुनै पनि साना व्यवसायहरू लागि पूर्ण छ, खुद्रा पसलहरु, सैलून र रेस्टुरेन्ट वा क्याफे. के तपाईं आफ्नो व्यापार को लागि आवश्यक बारेमा अनुसन्धान मा घन्टा खर्च छैन. Harbortouch तपाईंले केही आधारभूत प्रश्नहरू सोध्छन् र तपाईं जवाफ छ. त्यसपछि, तिनीहरूले सिस्टम कस्तो तपाईं वास्तवमा आफ्नो व्यवसाय वा स्टोर लागि आवश्यक थाहा हुनेछ. एक न्यूनतम शुल्क संग तपाईं तिनीहरूलाई देखि एक महान सेवा प्राप्त गर्न सक्छन्.
Harbortouch आफ्नो फरक व्यापार आवश्यकताको अलग POS सिस्टम प्रदान. तपाईं सबै भन्दा राम्रो तपाईं व्यापार कस्तो आधारित चयन गर्न सक्नुहुन्छ. को POS सिस्टम को प्रत्येक फरक आवश्यकता र विशेष व्यापार को आवश्यकताहरु कवर कि विभिन्न सुविधाहरू छ. त्यसैले, फ्री 'विकल्प लागि सुरु भएको एट मा क्लिक गर्नुहोस् र तिनीहरूले सोध्न प्रश्नहरूको केही जवाफ. तिनीहरू यहाँ तपाईं यस्तो परिधान वा जूता रूपमा स्वामित्व व्यापार को प्रकार बारेमा सोध्न हुनेछ, होटल वा रेस्टुरेन्ट, सैलून वा किराना पसल आदि. तपाईंले सबै प्रश्नहरूको जवाफ पूरा गरेको छ, तिनीहरूले आफ्नो नि: शुल्क सेटअप आवेदन फर्वार्ड हुनेछ.
कसरी फ्री POS सिस्टम प्राप्त गर्न?
यो Harbortouch तपाईंको खुद्रा पसलहरु र रेस्टुरेन्ट लागि निःशुल्क POS सिस्टम प्राप्त गर्न एकदम सजिलो छ. तपाईंले यसलाई प्राप्त गर्न केही सरल र सजिलो कदम पालना गर्न. यी हुन्:
सम्पर्क Harbortouch: तपाईं पहिलो निःशुल्क POS सिस्टम प्राप्त लागि Harbortouch सम्पर्क. त्यसको लागि, तपाईं बिक्री प्रस्तावको निःशुल्क बिन्दु लागि लागू गर्न. स्वीकृति प्राप्त: एक पटक तपाईं बिक्री प्रणाली को नि: शुल्क बिन्दु लागि लागू गरेका छन्, तपाईं आफ्नो अनुमोदनको लागि प्रतीक्षा छ. जब तपाईं निःशुल्क सफ्टवेयर र हार्डवेयर लागि स्वीकृत प्राप्त, तपाईं जान राम्रो. तपाईं बस समर्थन र services.Free स्थापना समेट्छ कि मासिक शुल्क तिर्न: तपाईं आफ्नो प्रमाणित टेक्नीसियन द्वारा अभिजात वर्ग मा Harbortouch देखि निःशुल्क स्थापना प्राप्त हुनेछ. तिनीहरूले प्रशिक्षित र प्रमाणित गर्दै छन् सबै टेक्नीसियन. यसैले, तपाईं एक ठूलो र सहज सेवा प्राप्त हुनेछ.
कि संग तपाईं पनि हार्डवेयर मा जीवनकालमा ग्यारेन्टी प्राप्त हुनेछ. कुनै अन्य अग्रिमसँग लागत छन्. तपाईं नि: शुल्क ओनसाइट स्थापना प्राप्त हुनेछ, निःशुल्क मेनु कार्यक्रम साथै निःशुल्क कागज आपूर्ति. एक पटक तपाईं यसलाई स्थापित, तपाईं आफ्नो कर्मचारी सबै भन्दा राम्रो समर्थन प्राप्त हुनेछ.
किन यो छनौट गर्न?
Harbortouch द्वारा बिक्री प्रणाली को नि: शुल्क बिन्दु छनौट तपाईं थुप्रै तरिकामा मदत गर्नेछ. तपाईं POS सफ्टवेयर र हार्डवेयर प्रदान सबै भन्दा राम्रो सेवाहरूको लागि अनुसन्धान घण्टा खर्च छैन. Harbortouch तपाईं आफ्नो खुद्रा पसलहरु लागि बिक्री प्रणाली को वर्ग बिन्दु मा सबै भन्दा राम्रो प्रदान गर्दछ, रेस्टुरेन्ट, सैलून र स्पा, साना व्यवसायहरू र क्याफेहरू. यो तपाईं कहिल्यै प्राप्त गर्न सक्छन् कि सबै भन्दा दु: खबाट-मुक्त सेवा छ. तपाईं बस अनलाइन कार्यक्रम को लागि लागू गर्न. तपाईं त मुक्त स्थापना र कुनै अग्रिमसँग लागत साथ POS उपकरण प्राप्त हुनेछ. पनि महिनाको सेवा र समर्थन शुल्क भुक्तानी गर्न हुनेछ कि धेरै कम छ. यो न्यूनतम शुल्क सबै अत्यावश्यक सेवा कवर.
के तपाईं व्यापार र स्वामित्व भने सबै भन्दा राम्रो र सबै भन्दा प्रभावकारी POS सिस्टम लागि देख, त्यसपछि Harbortouch कि तपाईंलाई प्रदान गर्न सक्छन्. तपाईं मुक्त POS सिस्टम तिनीहरूलाई द्वारा प्रस्तावित लागि लागू गर्न सक्नुहुन्छ. यो निःशुल्क सफ्टवेयर र हार्डवेयर तपाईंको व्यापार आधारित समावेश. यो पनि तपाईंको व्यापार चलिरहेको र सजिलै आफ्नो बिक्री विश्लेषण लागि आवश्यक सबै आवश्यक सुविधाहरू आउँछ. त्यसैले, यो पैसा रूपमा साथै आफ्नो बहुमूल्य समय धेरै बचत. Harbortouch कुशलतापूर्वक आफ्नो सबै POS सिस्टम आवश्यकता र आवश्यकताहरु हेरविचार गर्न सक्नुहुन्छ.